कृषि विकास बैंकले गर्यो साढे ५७ करोड नाफा « Arthatantra.com : A Complete Economic News Portal From Nepal.
कृषि विकास बैंकले गर्यो साढे ५७ करोड नाफा
विराटनगर । कृषि विकास बैंक क्षेत्रीय कार्यालय विराटनगरले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा कूल ५७ करोड ५२ लाख १२ हजार रुपैयाँ नाफा आर्जन गरेको छ ।
बैंकले १४ अर्ब ७५ करोड ९२ लाख रुपैयाँ लगानी गर्ने लक्ष्य लिएकोमा उक्त अवधिमा १४ अर्ब ५२ करोड ३१ लाख रुपैयाँ लगानी गरी ९८ प्रतिशत प्रगति हासिल गरेको बैंकले जनाएको छ ।
अघिल्लो आवमा बैंकले १२ अर्ब ८९ करोड ९४ लाख ४७ हजार रुपैयाँ लगानी गरेको थियो । अघिल्लो वर्षको तुलनामा गत वर्ष एक अर्ब ६२ करोड ३६ लाख ६५ हजार रुपैयाँभन्दा बढी रकम लगानी गरेको बैंकका सूचना अधिकारी जीवन घिमिरेले जानकारी दिनुभयो ।
गत आर्थिक वर्षमा आठ अर्ब ४३ करोड ३४ लाख निक्षेप सङ्कल गर्ने लक्ष्य लिएको बैंकले सो अवधिमा सात अर्ब ४२ करोड ९६ लाख रुपैयाँ निक्षेप सङ्कलन गरी ८८ प्रतिशत प्रगति हासिल गरेको छ ।
यो लक्ष्यको तुलनामा एक अर्ब तीन करोड ३८ लाख रुपैयाँ कमी हो । बैंकले गरेको लगानीमा शङ्कास्पद नेक्सानी व्यवस्थामा ३३ करोड ४९ लाख ८२ हजार रुपैयाँ रकम राखेको छ ।
बैंकले गत आर्थिक वर्ष कृषि कर्जातर्फ इलाममा चार अर्ब ३५ करोड ६५ लाख रुपैयाँ, झापामा आठ अर्ब ६५ लाख ८५ करोड रुपैयाँ, धनुकटा र तेह्रथुममा एक अर्ब ८९ करोड, सुनसरीमा एक अर्ब २० करोड र मोरङमा एक अर्ब २७ करोड रुपैयाँ लगानी गरेको छ ।
त्यस्तै उद्योगतर्फ इलाममा एक करोड १७ लाख, झापामा सात करोड ७७ लाख, धनकुटा र तेह्रथुममा ७१ लाख, सुनसरीमा सात करोड ९३ लाख र मोरङमा दुई करोड ६० लाख रुपैयाँ लगानी गरेको बैंकले जनाएको छ ।
कूल एक लाख ४६ हजार ४३० सेवाग्राही रहेको बैंकमा ५४ हजार १६७ जना सक्रिय छन् । मेची र कोशी अञ्चल कार्यक्षेत्र रहेको बैंकमा ३३ वटा शाखा, एक क्षेत्रीय कार्यालय र मोरङमा एक तालीम केन्द्र छन ।
बैंकले खानी, कृषि, उद्योग, होटेल तथा पर्यटन, निर्माणसम्बन्धी, घरायसी कर्जा, आयात–निर्यात कर्जा, जलविद्युत, चिया र अलैँची, नगदेबाली जस्ता क्षेत्रमा लगानी गर्नुका अतिरिक्त सरकारको अनुदानको काम, सरकारी कारोवार, स्थानीय निकायको खाता, सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण, वन र विद्यालयमा संस्थागत उत्तरदायी निर्वाह गर्दै विदेशी मुद्रा खरीद– बिक्री गर्ने गर्दछन । -रासस
२०७६ भदौ ३ गते प्रकाशित
बैंकमा पैसा अभाव, गाडीको आयात मुख्य कारण !
काठमाडौं । गत वर्ष असोज दोस्रो सातादेखि सुरु भएको लगानीयोग्य पैसा अभाव यो वर्ष असोज
सेयरधनीलाई पौने तीन अर्ब बोनस बाड्ने नेप्सेमा सुचिकृत यी १३…